कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ३ द्वारा हालसम्म २ सय घरपरिवारलाई राहत उपलब्ध – BANKE POST
Posted on April 17, 2020 April 17, 2020 Author Hari Adhikari	Comment(0)
५ बैशाख, नेपालगन्ज ।कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ३ ले हालसम्म २ सय घरपरिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको छ । कोरोना भाईरसका कारण लागु गरिएको लकडाउनको अवधिमा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका २०० घर परिवालाई राहत वितरण गरीएको वडाध्यक्ष माधव रिजालले जानकारी दिए ।
रिजालका अनुसार २०० घर परिवार बाहेक अन्य १५० घरभुरीलाई समेत बिभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा राहत उपलब्ध गराईएको छ । शुक्रबार सामाजिक संजाल फेसबुकबाट राहत वितरणको विवरण सार्वजनिक गर्दै रिजालले यस्तो जनाएका हुन । उनले वडामा भएका राहत वितरणका सम्पूर्ण गतिविधिहरु आगामी दिनमा सार्वजनिक गरीने समेत बताएका छन ।
कोरोनाका कारण सृजित विषम परिस्थितिमा बिपन्न नागरिकलाई सहयोग पुग्ने खालका राहत कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु वडा र वडावासीको दायीत्व भएको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष रिजालले सबैलाई एकजुट भएर कोरोना बिरुद्धको अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गरेका छन ।
२२ जेठ, बाँके । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले लकडाउनलाई ब्यवस्थित गर्न बार अनुसार ब्यवसाय संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको सर्वदलिय, सर्वपक्षित बैठकको सुझावका आधारमा प्रशासनले ब्यवसाय संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले एक सुचना मार्फत हरेक आईतबार र बुधबार मोबाईल, ईलेक्ट्रोनिक्स, स्टेशनरीरपुस्तक पसल, फोटो स्टुडियो, छापाखाना, […]
२३ चैत्र, बाँके । शनिबार बेलुका मात्र लकडाउन उलङ्घन गर्ने ४ सय ४१ मोटरसाइकल र स्कुटरका चापी नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी बाँकेले जनाएको छ । लकडाउन उलङ्घन, सडकमा अटेरी गरि सवारी चलाउने र नटेर्नेहरुका विरुद्ध थप कडा बन्ने भएको छ । हाल कोरोनाको संक्रमण व्यापक रुप लिएको छ ।सो लकडाउनलाई कडाईकासाथ कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रहरी […]